5 Best Day Njem Site Amsterdam Site Train | Save A Train
Home > Travel Europe > 5 Best Day Njem Site Amsterdam Site Train
Oge Ọgụgụ: 5 nkeji(Emelitere ikpeazụ On: 25/01/2021)
Amsterdam bụ ihe dị ebube obodo nleta. Enwere nke ukwuu ịhụ na-eme ebe a na ị ga-eleghị anya, mgbe ina gbụrụ. Otú ọ dị, ọ ka ga-abụ oké na mix ihe elu. Nke ahụ bụ n'ihi Amsterdam bụ oké amalite ọtụtụ ịtụnanya ụbọchị njem.
Ya mere, ma ọ bụrụ na ị chọrọ ịga na ụfọdụ ndị kasị mma ụbọchị njem si Amsterdam, ị ga-ahọrọ nri ebe. Ke ibuotikọ emi, anyị ga-ekpuchi n'elu ise ụbọchị njem ị pụrụ si Amsterdam. Ọzọkwa, anyị ga-enye gị ozi na ị chọrọ na na otú iru ebe ndị a ụgbọ okporo ígwè. Site na njedebe nke ibe, ị ga-enwe ihe niile ị chọrọ na-amalite ihe ịrịba njem si Amsterdam!
Okporo ígwè Transport bụ The Eco Enyi na Enyi Way To Travel. nkena-isiokwu e dere na-akụziri banyere Train Travel site Save A Train, Ndị dị ọnụ ala Train Tickets weebụsaịtị Na The World.
1. London: Otu Of The Nnọọ Best Day Njem Site Amsterdam!
Mgbe ị na-ekpebi na-aga na a ụbọchị njem si Amsterdam, ọtụtụ ndị na-ahọrọ ihe ọ bụla na gburugburu. Gịnị na-agbata cheta na-obodo na Netherlands, Belgium, na ma eleghị anya, Germany. Otú ọ dị, ha na-adịkarịghị kpebie ịga London.
Na echiche anyị, nke a bụ otu n'ime ihe ndị kasị mma ụbọchị njem si Amsterdam ị pụrụ. Gịnị? Nke ahụ bụ n'ihi na nke a ụbọchị njem a na-eleghara anya. N'ihi na ihe mere, i nwere ike inwe a ahụmahụ pụrụ iche enweghị hassle nke ọtụtụ ndị njem nleta eri gị ohere.
Na n'elu nke, London bụ a oke obodo na a ọtụtụ na-akpali akpali ihe na-ahụ ma na-eme. Plus, ọ bụ ihe jupụtara akụkọ ihe mere eme na ebube ije. Ọ bụrụ na ọ bụghị ihe nile na, ị ga-enweta ohere ruo n'okpuru ama English Channel.
Ọ bụrụ na ị na-ekpebi na-aga, ebe a bụ ntakịrị ihe Ama gị mkpa na ụgbọ okporo ígwè. Ọ na-ewe gburugburu awa anọ iru London via ụgbọ okporo. Ọ bụ a bit ogologo, ma dị ka ọtụtụ ndị na-aga dokwara anya ebe si Amsterdam, ọ bụ karịa na-apụtakarị. All mkpa ka ị na-eme na-amalite n'oge na-alaghachi mbubreyo, na ị ga-ejedebe na-enwe ihe dum ụbọchị na London.
2. eji: Ebe The akụkọ ifo Amalite
Anyị niile maara na ịma mma nke Amsterdam tumadi ụgha na ya ọwa mmiri na ije. Otú ọ dị, ị maara na ihe niile nke na dị Bruges, Belgium? Ka emechara, ọ bụ Bruges ha na-akpọ ndị Venice nke North, bụghị Amsterdam!
Ihe ọzọ bụ na, Bruges bụghị naanị nwere niile na ma bụ otu n'ime ndị kasị mma akụkọ ifo obodo nile nke Europe. Na-eme ka a na njem e onye nke kasị mma ngwọta maka gị ụbọchị njem si Amsterdam.
Ọ bụrụ na ị kpebie ịga Bruges, ị ga-ohere na-atụ ụfọdụ ndị kasị mara mma ochie ụlọ ke niile nke Europe. Ma ọ bụrụ na ndị na-ezughị, Bruges obụrede mbụre ụfọdụ nke kasị atọ ụtọ ejiri mee chocolate!
Mgbe na-aga site Amsterdam na Bruges, ị nwere ike mfe ụgbọ oloko gaa. The dum njem bụ nnọọ ọnụ ala, na ọ ga-ewe gị na-erughị awa atọ iji ruo kpokọtara obodo.
Amsterdam na Bruges Ụgbọ oloko
3. The Hague: Ị gaghị agbaghara ya!
Nile si ụbọchị njem si Amsterdam ị pụrụ, Hague bụ onye na-ekwesịghị Agbaghara. Isi ihe mere n'ihi na ọ bụ eziokwu na Hague bụ otu n'ime ihe ndị kasị mkpa obodo na Netherlands. Ọ bụkwa otu n'ime ndị kasị mara mma.
Onye kwesịrị adịghị mkpa ọ bụla ọzọ ihe n'ihi na ịga na. Otú ọ dị, ma ọ bụrụ na ị chọrọ ịmatakwu, ị kwesịrị ị na-maara na Hague bụ nnọọ nso Amsterdam. The ụgbọ okporo ígwè na-ewe gburugburu otu awa na bụ nnọọ ọnụ ala.
The Hague bụ oche ochichi na Netherlands, otú i nwere ike ịtụ anya ịhụ a otutu nnukwu ụlọ. The obodo bụkwa ọnọdụ nke International Court nke Ikpe Ziri Ezi, nke bụ ihe ọzọ ga-ahụ ebe.
N'ikpeazụ, mgbe ị na-eru Hague, eme ka n'aka gaa Madurodam. Ọ na-a miniature ịpasa ị ga-kasị maa ife.
4. Cologne: An Ọtụtụ mgbe agbaghara Gem Of Germany
Germany bụ mba jupụtara na ọtụtụ ịtụnanya obodo. Otú ọ dị, adịkarịghị eme ndị na-ele ọtụtụ n'ime ha n'ihi na otu onye nke ụbọchị ha njem si Amsterdam.
Ọ bụ ezie na nke ahụ bụ ikpe, Germany bụ ka bara uru na-eleta. Nke ahụ bụ eziokwu karịsịa ma ọ bụrụ na ị na-ekpebi na-aga Cologne, ihe mgbe echefu mkpuru of West Germany. The ebube obodo ụgha na bịara n'ikperé mmiri nke dokwara ebube Rhine River. Ihe ọzọ bụ na, Cologne bụ center nke aku na uba, omenala, na njem nke West Germany.
Ọ bụrụ na ị na-ekpebi na-aga a magburu onwe obodo, ị ga-enwe ọtụtụ puku afọ nke akụkọ ihe mere eme na-enwe mmasị. Ke ata n'etiti obodo ụgha a oke katidral. Ọ bụ otu n'ime ndị kasị pụtara ebe ofufe ị ga-esi na-ahụ na ihe niile nke Europe.
The ihe ọma banyere Cologne bụ na ọ bụ naanị gburugburu awa atọ via ụgbọ okporo. Ya mere, ma ọ bụrụ na ị na-ekpebi na-aga n'ebe a ụbọchị njem, ị ga-iru obodo na oge.
Berlin na Aachen Ụgbọ oloko
Aachen na Cologne Ụgbọ oloko
5. Day Njem Iji Paris Site Amsterdam: Gịnị More Iji Kwuo?
Train njem si Amsterdam na Paris na-eji na-adị nnọọ ogologo. Otú ọ dị, dị ka n'oge, ha na-ikpeazụ gburugburu awa atọ, na-eme ka Paris a zuru okè ebe maka otu n'ime gị ụbọchị njem si Amsterdam.
Famous n'ihi na ya art ngosi ihe mgbe ochie, ije, na nri, Paris bụ otu ebe nke na-achoghidi iwebata. E nwere obere ka ga-ekwu banyere nke a ma ama n'obodo ahụ, nwere ike n'ihu romanticize ya ma ọ bụ ịrata gị.
Site Eifel Tower ka Versailles, Paris jupụtara n'ọnu na ebe ileta na ihe na-eme. The obodo nke ìhè bụ ndị kasị ewu ewu na-aga n'ebe ụwa dum, na anyị maara ihe mere. Ya mere, Ekwela oge gị na-agụ banyere ya dị nnọọ na-aga ebe!
Ise a kacha mma ụbọchị njem si Amsterdam na-n'aka-eme ka gị ezumike-agaghị echefu echefu, na n'ihi na ha niile bụ ndị na-adị mfe a pụrụ ime eme ụgbọ okporo ígwè, unu enweghị ngọpụ ghara nleta mgbe ị na-na Europe!
na, ma ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla, na-eche free kọntaktị Save A Train!
Ị chọrọ Embed anyị blog post “5 Best Day Njem Site Amsterdam Site Train” na na gị na saịtị? Ị nwere ike ma na-ewe anyị foto na ederede na-enye anyị n'aka na a njikọ a blog post. Ma ọ bụ pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-day-trips-amsterdam%2F የሰማይ አካላት- (Pịgharịa gaa na ala a obere ịhụ Embed Usoro)
Daytrips europetravel Train Travel travelamsterdam njegharị travelengland travelgermany nje ndi njem travelparis
Njem ụgbọ oloko, Ingbọ oloko na Belgium, Train Travel France, Inzọ Njem Germany, Train Travel Holland, Zụọnụ Ndụmọdụ, Travel Europe
Olee otú Iji Nweta Iji Tomorrowland Site Train
Ingbọ oloko na Belgium, Zụọnụ Ndụmọdụ